Marina ve fa ny rindran-tsoratry ny contexts ankehitriny dia ny volamena?
Ny rindran-kaonty ifanakalozan-kevitra dia angamba ny singa manan-danja indrindra momba ny fananganana rohy ao amin'ny Search Engine Optimization (SEO). Ny zavatra dia tsy hoe ny rohy rehetra dia tsy mitovy - mipetraha fotsiny, ny fitaovam-pikarohana lehibe (toa an'i Google, sy Yahoo ary Bing) dia manome lanja bebe kokoa amin'ny karazana backlinks. Anisan'ireo hafa, ny rindran-kiheba hita ao amin'ny pejin'ny tranonkalan'ny orinasanao orinasa lehibe na ny blôgy dia ho ny rohy manan-danja indrindra amin'ny hery lehibe toy izany ho an'ny tanjona SEO.
Fa maninona izy ireo no sarotra?
Noho izany, marina ianao - ny rindran-kiheba ankehitriny dia ekena ho toy ny tena zava-boaary volamena. Ny olona sasany dia miantso azy ireo hoe "ny Grail Masina an'ny SEO. "Nahoana no nankasitraka izany izy ireo? Satria raha toa ianao ka anisan'ireo izay maniry ny fahafahan'ny tranonkala iray na ny bilaogy hitombo ao amin'ny lazany - ity karazana rohy ity dia tena ilainao ny mankafy izany fandrosoana haingana izany.
Inona no mahatonga ny Backlinks amin'ny endriny amin'ny famaritana?
Raha mandinika ny fe-potoana rehetra amin'ny tranonkala fifaneraserana eo amin'ny sehatra, andao hizaha ny teniny amin'ny teny mba hahatakarana tsara kokoa. Voalohany indrindra, tranonkala iray tsy manam-paharoa dia manaparitaka ny làlana hanaraha-maso ny votoaty amin'ny tranokala na bilaogy rehetra. Faharoa, ny votoaty ho an'ny rohy dia midika fa tokony ho hita matetika ao anaty votoatin'ny pejy - miseho amin'ny soratra ara-piraketana ara-boajanahary, ny rindran-kiheba tsy misy adiresy dia tsy mamela ny lisitry ny sisin-dambana kely hita any amin'ny tranokala. Ary fahatelo, ny fiverimberenan'ny SEO dia midika ho rohy ivelany (raha tsy misy, rohy ao anaty aterineto) hita ao amin'ny vohikala na bilaogy iray hafa ary manondro ny pejy manokana.
Ahoana no ataon'izy ireo ao amin'ny tranokala?
Raha jerena ny fanamafisana ny SEO, ny rindran-kiheba mivantana mivantana eo amin'ny pejy fandraisana dia ireo singa tena mahomby amin'ny fitadiavana ny dingana rehetra amin'ny tranonkala na blôgy amin'ny fikarohana an-tserasera. Ny zavatra dia ny zava-drehetra momba ny fahombiazan'izy ireo ao amin'ny SEO - ny tontolon'ny tontolon'ny fifandraisana dia eo ambonin'ny solaitrabe hatrany Google, satria izy ireo dia voafaritra mazava tsara ao anaty votoaty ary mijery organika. Amin'izay fotoana izay ihany, ny tena zava-misy dia ny tranonkala na bilaogy no manome ny lanjany lehibe kokoa raha ny tranokalan'ny tranokala. Nahoana? Raha vao tafiditra ao amin'ny pejy fandraisana an-tserasera, ireo rindran-tserasera tahaka izao dia hitarika anao kokoa ny fifamoivoizana an-tserasera - misy ihany ny tranonkala tokana, izay "vavahady" novakian'ny mpampiasa rehetra mitsidika tranokala na bilaogy mba hijery ny votoaty amin'ny pejy hafa.
Farany, tadidio fa ny zavatra rehetra momba ny rohy momba ny tranonkala dia tsy miasa afa-tsy amin'ny domains matanjaka matanjaka sy tranonkala amin'ny PR. Midika izany fa ny lanjan'ny antotan-dahatsoratra tsirairay dia manana lanjany bebe kokoa, tsy hoe hatramin'ny niverenany mivantana teo amin'ny pejy fandraisana, fa satria ny tranonkala iray manontolo (na bilaogy) dia sarobidy Source . Noho izany, inona no lanjany fototra ilaina mba hahazoana ny ankamaroan'ny rindran-kira misy anao - pejy tokana tokana, sa angamba ny tranonkala rehetra nalaina tamin'ny isa? Samy!